Waxaad heli doontaa kaalmo dhaqaale haddii aadan naftaada biilan karin - Asylum in Finland
Cuntada, deegaanka iyo adeegyadu waa ku qaali Finland marka la barbardhigo wadamo badan. Isbarbardhigga cuntada Finland waxey wadamada Yurub uga jirtaa kuwa ugu horeeya: cuntadu Finland waxey shan qeybood hal qeyb ka ka badan tahay celcelis ahaan wadamada Midowga Yurub. Deegaankuna waa qaali Finland gaar ahaan magaalooyinka waaweyn.
Megangelyo-doone ahaan waxaad kaalmo dhaqaale ka heleysaa xarunta qaabilaadda haddii aadan naftaada biilan karin. Lacagta qaabilaadda waxaa loogu talagalay baahiyada aasaasiga ah ee aan laga maarmin, sida cuntada, dharka iyo qarashaadka yaryar ee daryeelka caafimaadka. Ogsoonoow, in lacagta dib lagaaga gudsan karo haddii ay cadaato in aad heysato lacag aad isticmaasho. Waxaa intaas dheer in lacagta lagaa dhimi karo haddii aad diido waxyaabaha laga qabto xarunta qaabilaadda, tusaale ahaan nadaafadda, ama waxqabadka waxbarasho, sida barashada luqada finnishka.
Megangelyo-doone ahaan waxaad Finland shaqo ka billaabi kartaa saddex ama lix ilood kaddib laga soo billaabo dhigista codsiga. Si kastoo ay ahaataba shaqo helistu waa ay adkaan kartaa sababtoo ah shaqo la’aanta ayaa korortay, waxaa shaqo la’aan ah Finnish badan oo waxbartay.
Luqada looga hadlo goobta shaqada ee Finnishku ku dhowaan markasta waa finnish. Kahor inta aadan baran luqada, waxaa kugu adkaan kara in aad hesho shaqo u dhiganta aqoontaada. Majalladaha ama xirfadaha qaarkood waxbarashadaadu waa in ay u dhigantaa heerka waxbarasho ee Finland laga aqbalsan yahay, waxeyna kugu noqon kartaa in aad dhameystirto waxbarashadaada kahor inta aadan billaabin sameynta shaqo u dhiganta xirfadaada. Shaqo ka raadinta Finland waxey kaaga baahan tahay firfircooni joogto ah.
codsiga megangelyda ogolaansha degitaanka qoys shaqo